इपिएसमार्फत कामदार लैजाने सम्झौता नवीकरण ! दुई वर्षको लागि नवीकरण !
काठमाडौँ, नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कामदार लैजानेसम्बन्धी सम्झौताको नवीकरण भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभाग, इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले आगामी दुई वर्षका लागि इपिएस प्रणालीमार्फत नेपाली कामदार कोरिया लैजाने सम्झौता नवीकरण भएको जानकारी दिनुभयो । दक्षिण कोरियाबाट आएको नवीकरणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालका श्रममन्त्री विष्टले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । त्यसअघि उक्त नवीकरणसम्बन्धी समझदारीपत्र हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।
हाल दक्षिण कोरियामा करीब ३५ हजार नेपाली कामदार कार्यरत रहेको शाखाले जनाएको छ । सन् २०१८ को भाषा परीक्षाबाट सात हजार ९९८ कामदार कोरिया जाँदैछन् । इपिएसमार्फत कोरिया जाने नेपालीको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । खाँडी मुलुकमा जस्तो कामदारले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु नपर्ने र आकर्षक तलब सुविधाका कारण पनि कोरिया नेपाली कामदारको रोजाइमा पर्दै आएको छ । अहिले नेपाली कामदारले मासिक रु एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज ०५, २०७५२०:२०
आयोजकले कार्यक्रममा बोलाए वापत मोडलसँग राखे “सेक्स प्रस्ताव”: नमान्दा कार्यक्रमबाटै हटाईयो
रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलसँग मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण ! किन मागियो स्पष्टीकरण ?
फेरी बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य!
एक हप्ता देखि गायब भएका पूर्व गाविस उपाध्यक्ष जङ्गलमा मृत फेला !